Ghana oo ah Xarunta cusub ee Adduunka ee xalalka geesinimada leh ee adkeysiga iyo soo kabashada
Location: Bogga ugu weyn » Soo dirida » Dalka | Gobolka » Ghana » Ghana oo ah Xarunta cusub ee Adduunka ee xalalka geesinimada leh ee adkeysiga iyo soo kabashada
In kasta oo ganacsiyada yaryar ay aasaas u yihiin dhaqaalaha meel kasta, masiibada ayaa muujisay sida ay muhiimka u yihiin. Silsilad sahayda badan ayaa khalkhal galisay iyadoo shirkadahani ay u halgamayeen sidii ay u noolaan lahaayeen.
U adkeysiga ganacsiga ee shooga waa walaac, iyadoo isbeddelka cimilada iyo haqab-beelka cuntada ay qarka u saaran yihiin.
Ururada dhiirigelinta ganacsiga iyo maalgashiga ee aduunka ayaa ku kulmi doona Accra 17-18 May si ay u sahamiyaan BXalka hore ee Adkeysiga iyo Soo kabashada, Mawduuca shirka sanadkan.
Shirkadaha sida aadka ugu adkeysanaya dhibaatooyinka waxay inta badan taabtaan adeegyada hay'adahan ganacsiga qaranka si ay u dhisaan adkeysi si ay ugu gudbaan waqtiyo adag.
2022 The Shirka Horumarinta Ganacsiga Adduunka (WTPO) waxaa martigelin doona Hay'adda Horumarinta Dhoofinta ee Ghana (GEPA) iyo Xarunta Ganacsiga Caalamiga ah (ITC), oo ah hay'ad horumarineed oo Qaramada Midoobay iyo Ururka Ganacsiga Adduunka oo isku xirta ganacsiyada yaryar iyo suuqyada caalamiga ah. Waxay isu keentaa 200 oo hoggaamiye oo ah ururrada dhiirrigelinta ganacsiga qaranka ee adduunka oo dhan.
"Ganacsiga wanaagsani wuxuu kicin karaa soo kabashada dhaqan-dhaqaale ee loo dhan yahay oo waara," ayay tiri Pamela Coke-Hamilton, Agaasimaha Fulinta ee ITC. 'Hay'adaha xayeysiinta ganacsigu waxay samayn karaan dhammaan isbeddelka caawinta shirkadaha inay gaaraan ganacsi wanaagsan. Waa inay caawiyaan ganacsiyada si ay u yareeyaan khataraha una qaataan fursadaha kala guurka cagaaran. Waa inay caawiyaan haweenka, dhalinyarada iyo kooxaha nugul inay ku biiraan silsiladaha qiimaha caalamiga ah, oo ay ka gudbaan caqabadaha nidaamka ee ka ilaalinaya inay horumariyaan ganacsigooda dhoofinta.'
Ilaha ganacsiga: Ururada horumarinta ganacsiga ee qaranka
Shirkaduhu waxay saddex jeer u badan tahay inay dhoofiyaan marka ay la shaqeeyaan ururada taageerada ganacsiga, marka loo eego sahannada ganacsiga ITC ee 16 waddan. Shirkadaha xiriirkaas lahaa ka hor qalalaasaha COVID waxay sidoo kale u muuqdeen inay si wanaagsan u heli karaan macluumaadka iyo faa'iidooyinka, sida kaalmada dowladda ee la xiriirta masiibada.
Xayeysiisyada: Iyada oo loo marayo tignoolajiyada dalxiiska dalwadda ah iyo aaladaha naqshadeynta qorshaha dhulka, waxaan ka dhignaa qorsheynta iyo iibinta dhacdooyinka mid fudud!
Ururadani waxay si toos ah uga qayb qaataan dhaqaalaha qaranka. A waxbarasho Hay’adaha dhiiri gelinta ganacsiga ee Yurub waxay muujiyeen in dollar kasta oo la geliyo hay’adahan, ay ka soo saaraan dhoofinta $87 oo dheeraad ah iyo $384 oo dheeraad ah oo loogu talagalay wax soo saarka guud ee dalka.
Abaalmarinta caalamiga ah
Saddex abaal-marin ayaa lagu dhawaaqi doonaa xafladda fiidkii 17-ka May. Waxay u aqoonsan yihiin ururada horumarinta ganacsiga ee qaranka hindiseyaal lagu caawinayo ganacsiyada si ay uga ganacsadaan xuduudaha. Dadka la magacaabay waa:
Isticmaalka ugu wanaagsan ee iskaashiga: Brazil, Jamaica, Nigeria, Qatar, Saudi Arabia
Isticmaalka ugu wanaagsan ee tignoolajiyada macluumaadka: Awstaria, Kanada, Malaysiya, Jamhuuriyadda Tansaaniya
Hindisaha ugu wanaagsan ee ganacsi waara oo loo dhan yahay: Sri Lanka, Jamhuuriyadda Kuuriya, Netherlands, Zambia, Zimbabwe
Shirweynihii 13aad ee WTPO iyo Abaalmarintu waxay ka dhici doontaa Hotel Labadi Beach ee Accra, Ghana 17-18 May. Waxaa la sameeyay 1996, shirku wuxuu dhacaa labadii sanaba mar. Martigeliyaha shirka waxaa soo xushay asaagooda oo ka kala yimid daafaha caalamka. Eeg barnaamijka oo isdiiwaangeli. Munaasabadda ayaa si toos ah looga daawan doonaa baraha bulshada ee xarunta ganacsiga caalamiga ah. Kala soco xaflada #WTPO2022 iyo #wtpoawards.
Ku saabsan Xarunta Ganacsiga Caalamiga ah – Xarunta Ganacsiga Caalamiga ah waa hay’adda wadajirka ah ee Ururka Ganacsiga Adduunka iyo Qaramada Midoobay. ITC waxay ka caawisaa ganacsiyada yaryar iyo kuwa dhexdhexaadka ah ee horumarinta iyo kala-guurka dhaqaalaha si ay u noqdaan kuwo aad ugu tartamaya suuqyada caalamka. Waxayna taasi ka qayb qaadanaysaa horumar dhaqaale oo waara oo ku jira qaab-dhismeedka Yoolalka Horumarka Waara ee Qaramada Midoobay.
Maamulka Horumarinta Dhoofinta ee Ghana - Hay'adda Horumarinta Dhoofinta ee Ghana waa ururka horumarinta ganacsiga qaranka ee Wasaaradda Warshadaha iyo Ganacsiga. Waxay sahlaysa, horumarisaa oo kor u qaadaa wax soo saarka Ghana ee tartanka dhaqaalaha adduunka. Waxay door hormuud ah ka ciyaartaa horumarinta jago suuqeed xooggan oo dhoofinta aan caadiga ahayn. Ku-guulaystayaashii hore ee abaal-marinaha WTPO, GEPA waxa doortay hay’adaha dhiirrigelinta ganacsiga ee adduunka oo dhan si ay u martigeliso daabacaadda sannadkan ee shirweynaha iyo abaal-marinnada Ururrada Horumarinta Ganacsiga Adduunka.
Qaramada Midoobay ee Ghana - Qaramada Midoobay waxay la shaqeysaa iyadoo kaashanaysa Dowladda iyo dadka Ghana (iskaashatada horumarinta, waaxda gaarka ah, tacliinta iyo bulshada rayidka ah) si loo helo horumar dhaqaale iyo bulsho waara, nabadda iyo xuquuqul insaanka iyo sidii loo gaari lahaa mudnaanta horumarinta Ghana iyo Yoolalka Horumarineed ee Joogtada ah. Waa taageere sharaf leh Shirka Horumarinta Ganacsiga Adduunka iyo Abaalmarinta Accra. Xarunteedu wareedku waxa ay taageertaa wacyigelinta iyo tabinta dhacdadan.
Accra Ghana Hotel Qaramada Midoobay Hay'adda Ganacsiga Adduunka
Wajiga Cusub ee Muhiimka ah ee 3 Daraasadda Insuliinta Afka
Bukaan-socodka sambabada ayaa ka faa'iidaysanaya bukaan-socodka fog...